विम्बल्डन: सेरेना विलियम्स खेले तर रोजर फेडेरर अनुपस्थित, GOAT रेसको अन्त्य नजिक – ENEWSTECH
सेरेना विलियम्स, रोजर फेडेरर र राफेल नाडालले उनीहरूबीच ६५ ग्रान्डस्लाम एकल उपाधि जितेका छन्।
स्थान: सबै इङ्गल्याण्ड क्लब मितिहरू: 27 जुन-10 जुलाई
कभरेज: BBC iPlayer, रातो बटन, जडित टिभी र मोबाइल एपमा व्यापक कभरेजको साथ बीबीसी टिभी, रेडियो र अनलाइनमा लाइभ गर्नुहोस्।
यो यस वर्ष विम्बल्डनमा एक युगको अन्त्य नहुन सक्छ तर सेरेना विलियम्सले गत हप्ता मात्र पुष्टि गरेपछि हामी यो नजिक पुगेको देखिन्छ। कि उनी खेल्छिन् 12 महिना पछि बाहिर, जबकि रोजर फेडेरर 1998 पछि पहिलो पटक मुख्य ड्र मा अनुपस्थित छ।
खुट्टाको पुरानो चोटका कारण राफेल नाडालको सहभागिता शङ्कामा परेको छ जसमा उनको करियर समाप्त हुने सम्भावना छ, जबकि एन्डी मरेको तयारी पेटको तनावले गर्दा बाधा पुगेको छ जसले उनलाई क्वीन्स गुमाउन बाध्य बनाएको छ।
डिफेन्डिङ पुरुष च्याम्पियन नोभाक जोकोभिच सोमबार उद्घाटन खेलमा सेन्टर कोर्टमा हुनेछन्, तर २०२० महिला विजेतासँग एश्लेघ बार्टी मार्चमा सेवानिवृत्त हुँदैछन्धेरै धेरै ग्रान्ड स्लाम च्याम्पियनहरूले SW19 मा चिन्तित निर्माण गरेका छन्।
हामी मूल्याङ्कन गर्छौं कि यो कम्तिमा केही खेलाडीहरूको लागि अन्तिम खेल हुन सक्छ जसले GOAT – सबै समयको सबैभन्दा ठूलो – टेनिसको ताज लगाउने दौडमा प्रभुत्व जमाएका छन्। र हामी स्पटलाइटमा कदम चाल्ने आशामा युवाहरूलाई हेर्छौं।
एक युगको अन्त्य?
१६ वर्षकी सेरेना विलियम्स सन् १९९८ मा विम्बल्डनमा पहिलो पटक खेल्दा तेस्रो राउण्डमा पुगेकी थिइन् ।
अन्तिम पटक विम्बल्डन विलियम्स बहिनी बिना आयोजित भएको थियो 1996, जब स्टेफी ग्राफले आफ्नो सातौं र अन्तिम उपाधि जिते, 21 वर्षीय टिम हेनम्यानले दोस्रो हप्तामा आफ्नो पहिलो रन बनाए र पुरानो कोर्ट वन अझै प्रयोगमा थियो।
अमेरिकी भेनस विलियम्स – आफैं सात पटकको ग्रान्ड स्लाम एकल च्याम्पियन – उनले 1997 मा विम्बल्डन एकलमा डेब्यू गरेपछि अर्को वर्ष सेरेना उनीसँग सामेल भए।
१७ जुनमा ४२ वर्षकी भेनसले सन् १९९७ देखि एउटा मात्र विम्बल्डन गुमाएकी छिन् तर गत समरदेखि खेलेका छैनन् र यो वर्ष लन्डनमा हुने छैनन्।
४० वर्षीया सेरेना गत वर्षको प्रतियोगितादेखि अनुपस्थित रहेकी थिइन् आफ्नो पहिलो राउन्डको खेलबाट आँसुले सन्यास लिइन् घाइते भएपछि सेन्टर कोर्टमा चिप्लिएर ।
उनी यो हप्ता मात्रै भ्रमणमा फर्किएकी थिइन् ईस्टबोर्नमा डबल्समा वाइल्डकार्ड विम्बल्डनमा एकलमा भाग लिने तयारीको रूपमा, जहाँ उनलाई वाइल्डकार्ड पनि चाहिन्छ।
उनको उमेर, चोटपटक र भ्रमणबाट लामो अनुपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, के यो उनको विम्बल्डन विदाई हुन सक्छ? यस वर्षको टूर्नामेंटमा अन्तिम पटक बाहिर निस्कँदा सेन्टर कोर्टका दर्शकहरूले उनको शरीरको भाषा अध्ययन गर्ने पक्का छन्।
एक अविश्वसनीय पुनरागमन बाहेक, यो उनको ग्रान्ड स्लाम एकल उपाधि ताली सधैंभरि 23 मा रहने सम्भावना देखिन्छ, मार्गरेट कोर्टको सबै समयको रेकर्ड भन्दा एक छोटो। 2018 मा सुत्केरी बिदाबाट फर्केपछि उनी चार ग्रान्डस्लाम फाइनलमा पुगेकी थिइन् तर, अहिलेसम्म, प्रतिष्ठित 24 औं स्थान सुरक्षित गर्न असमर्थ छिन्।
यस वर्षको विम्बल्डनका लागि प्रवेश सूचीमा अनुपस्थित ४० वर्षीय फेडेरर छन् ।
त्यसैगरी, उनी २०२१ को टूर्नामेंट पछि टेनिस कोर्टमा देखिएका छैनन्, जब उनले क्वार्टर फाइनलमा ह्युबर्ट हुर्काजसँग सीधा सेटमा हारेर पीडादायी निकास सहेका थिए।
सेन्टर कोर्टको भीडले ती सेटहरू मध्ये तेस्रो 6-0 हारेको रूपमा असहज रूपमा हेर्यो र हप्ताहरूमा उसलाई तेस्रो घुँडाको शल्यक्रिया आवश्यक थियो, जसले उसलाई कार्यमा फर्कन “आशाको किरण” दिनेछ भन्यो।
आठ विम्बल्डन र समग्रमा २० ग्रान्डस्लाम उपाधि जितेका स्विस फेडेरर आफ्नो पुनर्स्थापनामा निकै सजग छन् । उनले अक्टोबरमा आफ्नो गृहनगर बासेलमा एटीपी टुरमा फर्कनु अघि सेप्टेम्बरमा लन्डनमा लेभर कप खेल्ने तालिका छ। उनले यस महिनाको सुरुमा भने उनी “निश्चय” खेल जारी राख्न चाहन्थेबाह्य लिङ्क 2023 मा।
तर, २०२० को सुरुदेखि १९ वटा प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलेकाले उनको शरीरले सार्थक पुनरागमन गर्न दिने हो कि होइन भन्नेमा गम्भीर शंका छ ।
उनका लामो समयका प्रतिद्वन्द्वी ३६ वर्षीय नाडालले हालैका वर्षहरूमा आफ्नै चोटपटकको समस्या व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो, विशेष गरी खुट्टाको समस्या, तर उनले कुनै न कुनै तरिकाले २०२२ मा अष्ट्रेलिया र फ्रेन्च ओपन जित्न सफल भएका छन् भने फेडेरर र जोकोभिचलाई २२ औं वर्षमा पराजित गरेका छन्। ग्रान्ड स्लाम, पुरुषको कीर्तिमान।
सीधा उनको पछि रेकर्ड-विस्तार 14 औं रोलान्ड ग्यारोस उपाधि, स्पेनियार्डले भने कि उसले “खेल जारी राख्न चाहँदैन” यदि उसलाई आफ्नो पुरानो दुखाइ सुन्नको लागि एनेस्थेटिक इंजेक्शन चाहिन्छ, जुन मुलर-वेइस सिन्ड्रोमले गर्दा हुन्छ – खुट्टाको हड्डीलाई असर गर्ने दुर्लभ अवक्रमण अवस्था।
पेरिसबाट फर्केपछि नाडालसँग रेडियोफ्रिक्वेन्सी एब्लेशन उपचार थियो – एक प्रक्रिया जसले स्नायुमा तातो प्रयोग गरी लामो समयसम्म दुखाइ कम गर्छ। त्यसयता उनले भनेका छन् उनी विम्बल्डन खेल्ने “इरादा” राख्छन् दुखाइ “शून्य” पछि।
बेलायतका ३५ वर्षीय मुर्रे चोटबाट झन् बढी प्रभावित भएका छन्, जनवरी २०१९ मा हिप रिसर्फेसिङ अपरेशनको आवश्यकता परेको छ। २०१३ र २०१६ का विम्बल्डन च्याम्पियनले त्यसबेलादेखि नै पेटको समस्याको श्रृङ्खलाको सामना गर्नुपरेको छ। स्टटगार्ट ओपनको फाइनलमा, जुन उनले माटियो बेरेटिनीसँग हारे।
यदि उसले विम्बल्डनका लागि पुन: प्राप्ति गर्न सफल भयो भने, कुनै पनि खेलाडीले पहिलो राउन्डमा गैर वरियताविहीन मरेलाई बराबरी गर्न खुशी हुनेछैन।
जोकोभिच, मरे भन्दा एक हप्ता कान्छो, गम्भीर चोटको चिन्ताबाट स्पष्ट देखिन्छ र अन्तिम व्यक्ति उभिएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि, GOAT दौडमा स्पष्ट रूपमा अघि बढ्नको लागि उनको धक्का रोकियो जब उनी जनवरीमा अस्ट्रेलियन ओपन अघि कोभिड-१९ खोप नभएको कारण अस्ट्रेलियाबाट निर्वासित भए। विम्बल्डनका लागि त्यस्ता कुनै प्रतिबन्धहरू नभए पनि खोप लगाइएन भने उनलाई युएस ओपनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सकिन्छ।
अर्को को आउँछ?
यस वर्ष कार्लोस अल्काराजलाई हराउने विम्बल्डन ड्रमा राफेल नाडाल र माटियो बेरेटिनी मात्र खेलाडी हुन्।
GOAT पछिको युग लामो समयदेखि प्रत्याशित गरिएको छ तर कम्तिमा पुरुषहरूको पक्षमा राम्रोसँग आउन बाँकी छ। 2004 को शुरुवात देखि, नाडाल, जोकोभिक र फेडेररले 73 ग्रान्ड स्लाम एकल उपाधि मध्ये 61 वटा जितेका छन्, मरे र स्टेन वावरिन्काले बाँकी 12 मध्ये छ वटा साझा गरेका छन्।
अन्य ६ जना ६ खेलाडीमा गएका छन्, सबैभन्दा भर्खरको रुसी ड्यानिल मेदभेदेव, जसले गत वर्षको युएस ओपनको फाइनलमा सर्ब जोकोभिचलाई क्यालेन्डर-वर्षको ग्रान्ड स्लाम जित्नबाट रोकेका थिए।
विश्व नम्बर एक मेदभेदेव पछि विम्बल्डनमा अनुपस्थित हुनेछन् अल इङ्ल्यान्ड क्लबले रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ युक्रेनमा रूसको आक्रमण पछि।
२६ वर्षीय इटालियन बेरेटिनी गत वर्ष फाइनलमा पुगेर विम्बल्डन जित्ने सम्भावित नयाँ नाम हुन् । आफ्नो रानीको उपाधि कायम राख्दै आइतबार।
नाडाल बाहेक, २०२२ को पुरुष फारम खेलाडी उनको छ साथी स्पेनी कार्लोस अल्काराज, जसको यो वर्ष चार उपाधि छ। मड्रिड ओपनको उपाधि जित्ने क्रममा १९ वर्षिय खेलाडीले नाडाल र जोकोभिचलाई हराए । निडर मनोवृत्ति र डरलाग्दो सबै-कोर्ट खेल भएको, अल्काराजले हरेक इन्चमा भविष्यको विश्व नम्बर एक र मल्टिपल स्ल्याम च्याम्पियन देखिन्छ।
केही मानिसहरूले उसलाई फ्रेन्च ओपनमा जाने मनपर्ने ठाने तर उनी क्वार्टर फाइनलमा अलेक्ज्याण्डर ज्वेरेभसँग हारे, जसले नाडाल विरुद्धको रोलान्ड गारोसको सेमिफाइनलमा लिगामेन्ट च्यातेपछि विम्बल्डन गुमाउनेछन्।
अर्को युवा खेलाडी जो स्ल्याम सफलताको शिखरमा देखा पर्छन्, 21 वर्षीय क्यानाडाली फेलिक्स औगर-अलियासिम हुन्, जसले पेरिसमा अन्तिम 16 मा पाँच सेटमा हार्नु अघि नाडाललाई सबै तरिकाले धक्का दिए।
फेलिक्स Auger-Aliassime यो वर्ष आफ्नो पहिलो ATP टुर उपाधि जित्यो
नवौं स्थानमा रहेका उनी गत वर्षको विम्बल्डनमा क्वार्टरफाइनल र युएस ओपनको सेमिफाइनलमा पुगेका थिए। उसले फेब्रुअरीमा रोटरडममा आफ्नो पहिलो एटीपी टूर उपाधि जित्यो आठ अघिल्लो फाइनलमा हारेपछि, र उनको खेलको विविधताले सुझाव दिन्छ कि उनी घाँसमा विशेष खतरनाक हुनेछन्।
Auger-Aliassime भन्दा एक वर्ष कान्छो, इटालीको Jannik Sinner ले पाँच उपाधि जितेको छ र गत वर्षको अन्त्यमा शीर्ष 10 मा गएको छ तर पछि 13 औंमा झरेको छ। दुई पटक ग्रान्डस्लामको क्वार्टरफाइनलमा पुगेका उनले विम्बल्डनमा अहिलेसम्म कुनै खेल जित्न सकेका छैनन्।
डेनमार्कका १९ वर्षीय होल्गर रुनले माटोमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि स्टेफानोस सित्सिपासलाई पराजित गर्दै फ्रेन्च ओपनको क्वार्टरफाइनल पुग्ने बाटोमा छनोट हुने भएका छन् । त्यहाँ, उसले अन्तिम फाइनल क्यास्पर रुडसँग एक तूफानी खेल हारे र पछि स्वीकार गरे कि उसले “थप भावनात्मक नियन्त्रण” देखाउन आवश्यक छ।
बेलायतका सबैभन्दा आशाजनक पुरुष खेलाडी २० वर्षीय ज्याक ड्रेपर हुन्, जो गत हप्ता पहिलो पटक शीर्ष १०० मा पुगेका थिए, यद्यपि उनी अहिले १०८ मा झरेका छन्।
बायाँ-ह्यान्डर ड्रेपरसँग शक्तिशाली सर्भ र ग्राउन्डस्ट्रोकहरू छन्। उनले गत वर्ष विम्बल्डनमा अन्तिम च्याम्पियन जोकोभिचलाई सेट आउट गरे र गत हप्ता क्वीन्समा पहिलो राउन्डमा अमेरिकी विश्व नम्बर 14 टेलर फ्रिट्जलाई हराउँदा उनले यस अवसरलाई अँगालेका थिए।
यस वर्षको विम्बल्डनबाट हराएका सम्भावित भावी प्रमुख दावेदार २१ वर्षीय अमेरिकी सेबास्टियन कोर्डा हुन्, जसले सोमबार “डरलाग्दो चट्टान र खुट्टा पिटेको” कारण बाहिरिए।
स्वाइटेक वि द फिल्ड
विम्बल्डनमा महिला उपाधिका लागि अत्यधिक मनपर्ने इगा स्विटेक हुन्, जसले लगातार ३५ जित हात पारिन्। फ्रेन्च ओपन जितेर यो महिना।
जनवरीमा अस्ट्रेलियन ओपनको सफलतापछि बार्टीले सन्यास लिएपछि, २१ वर्षीया पोल स्विटेकले फेब्रुअरीको मध्यमा अन्तिम पराजयपछि ६ उपाधि जितेर आफूलाई स्पष्ट नम्बर एकको रूपमा स्थापित गरिन्।
उनको रेकर्ड डरलाग्दो प्रभावशाली छ: उनले सीधा सेटहरूमा लगातार नौ फाइनल जितिन्।
Swiatek बाहिर, यो धेरै खुल्ला ड्रमा देखिन्छ जुन धेरै युवाहरूले छाप बनाउने आशामा छन्।
युएस ओपन च्याम्पियन 19 वर्षीया एम्मा रादुकानुले गत वर्ष क्वालिफायरको रूपमा फ्लसिङ मीडोज उपाधि जित्नको लागि चकित र अझै पत्याउन नसकिने दौडपछि स्वाभाविक रूपमा घरको धेरैजसो ध्यान आकर्षित गर्नेछिन्।
त्यसअघि, रादुकानु विम्बल्डनको चौथो राउन्डमा पुगेकी थिइन्, जहाँ उनलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि अजला टोमल्जानोभिकविरुद्ध सन्यास लिन बाध्य पारिएको थियो।
कोको गफ विश्वमा करियरको उच्च १२ औं स्थानमा छन्
फ्रेन्च ओपनको फाइनलमा स्विटेकसँग हारेकी कोको गफले २०१९ मा विम्बल्डनमा १५ वर्षको उमेरमा क्वालिफायरको रूपमा चौथो राउन्डमा पुग्दा सफलता हासिल गरिन्। अमेरिकी गत वर्ष उही चरणमा पुग्यो र यस पटक गहिरो जान सक्छ।
रोल्यान्ड ग्यारोसमा स्विटेकबाट सेट जित्ने एक मात्र खेलाडी चिनियाँ १९ वर्षीया झेङ क्विन्वेन थिइन्, जसले झण्डै तीन घण्टासम्म पोललाई धकेलिन्, पहिलो सेटमा ५-२ बाट पछाडि फर्किएकी थिइन् र उनले धम्की दिएर पाँच सेट अंक बचाएकी थिइन्। चौथो राउन्डमा ठूलो अपसेट। अब विश्वमा 53 सम्म, यो उनको विम्बल्डन डेब्यू हुनेछ।
एक खेलाडी जो राडार अन्तर्गत जान सक्छ 2019 यूएस ओपन च्याम्पियन बियान्का एन्ड्रिस्कु, जो तब देखि चोटहरु द्वारा ग्रस्त छ।
क्यानेडियन, 22 जुन 16 मा, गत वर्ष खेलबाट सन्यास लिने विचार गरे र मानसिक स्वास्थ्य चिन्ताको कारण उनको 2022 सिजन सुरु गर्न ढिलाइ भयो।
उनले यो वर्ष अघि मात्र एउटा टुर-लेभल ग्रास-कोर्ट खेल जितेकी थिइन्, तर विम्बल्डनमा उनको वरीयतामा पुन: उक्लिएको देख्न पाउँदा खुसीको कुरा हुनेछ।
गत वर्ष युएस ओपनको फाइनलमा रादुकानुसँग पराजित भएकी क्यानाडाकी लेलाह फर्नान्डेजले खुट्टाको तनावका कारण विम्बल्डन गुमाइन्।
फ्रेन्च ओपनमा सिमोना हालेपलाई झेङ किन्वेनले हराइन् भने अन्तिम च्याम्पियन इगा स्विटेकसँग हारे